Anti-zavona azo tanterahina vita amin'ny nify mirindra tanteraka China Manufacturer
Description:Zava-bita feno volo mifono vy,Anti Fog Shield,Feno aretin-tsaina vita amin'ny tarehy
Home > Products > Mask Shield > Anti-zavona azo tanterahina vita amin&#39;ny nify mirindra tanteraka
Model No.: MAS11
Ny mask Shield dia afaka miaro amin'ny mason-koditra sy ny maso. Manana ny toetra mampiavaka ny on-drog anti-fog, anti-static ary anti vertigo. Izy io dia mahomby amin'ny fisorohana ny fahitana mivalapatra vokatry ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana sy ny etona-rano, ary tsy misy fientanam-panahy amin'ny fitaratra izany. Ny lanjan'ny saron-tava dia maivana ary manjombona, mahazo aina ary tsy mitondra lanja mavesatra. Mahomby mba hisorohana ny ratra mety hateraky ny fandatsahan-dra, ny tsiranoka amin'ny vatana ary ny simika manimba.
Torolàlana Mask Shield :
1. Diniho raha misy simba na simba ny rakotra fiarovana Mask Shield , ary madio ary manolo ny entana amin'ny fotoana voafetra
Anti-zavona azo tanterahina vita amin'ny nify mirindra tanteraka Contact Now
Azo soloina Shield Film Shield Film Shield Contact Now
Zava-bita feno volo mifono vy Anti Fog Shield Feno aretin-tsaina vita amin'ny tarehy Fiarovan-tena volo madinika Af Tavoahangy volontany Manadio rano fisotro madio data centre cooling Fiarovana feno tarehy